Iibso budada Trenavar (4642-95-9) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Budada Trenavar (4642-95-9)
SKU: 4642-95-9. Category: Qaar kale waxay
AASraw wuxuu la leeyahay karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xakamaynta budada Trenavar (4642-95-9), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Trenavar waxaa si rasmi ah loo yaqaan 'Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, iyo sidoo kale Trendione iyo waqtiyada 10 ka badan oo ka badan kuwa testosterone. Trenavar waa habdhaqanka diiradda saaraya 17b-HSD1 si uu u abuuro Trenbolone firfircoon, taasoo macnaheedu yahay mar marka jirkaaga Trenavar ku bedesho Trenbolone ama Tren.
Fiidiyowga budada Trenavar
Budada Trenavar Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Trenavar
Formula kelli: C18H20O2
Miisaankani waa: 258.36
Color: Caddaan cad ama midab huruud ah Crystalline
Saamaynta budada Trenavar
Magacyada kiimikada: Estra-4,9,11-triene-3,17-dione
Magacyo kale: Trendione, Trenabol, Tren Elite, T-Var 15 iyo Super Trenabol.RU-2065, Noocyada Trenava, Qalabka Trendione
Isticmaalka budada Trenavar
Budada Trenavar waxaa si rasmi ah loo yaqaan 'Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, iyo sidoo kale Trendione iyo waqtiyada 10 oo ka sii badan oo ka badan testosterone. Duufaanta ceymiska ee Trenavar ayaa ah hormar ah oo diiradda saaraya 17b-HSD1 si ay u abuuraan Trenbolone firfircoon, taasoo macnaheedu yahay mar marka jirkaaga Trenavar budada cayriin caanaha Trenbolone aka Tren. Isticmaalayaasha budada Trenavar waxay la kulmaan xaddi badan oo xoog leh oo kor u kaca iyo sidoo kale tiro. Isticmaalayaasha sidoo kale waxay dareemaan dufan dufan leh iyo muruqyada oo sii kordhaya. Qaybta budada Trenavar waxay leedahay caan ku soo korodhay iyo dalabaad sababtoo ah natiijooyinkeeda xooggan ee wareegyada gaaban. Xaqiiqdii waxay tahay tan ugu fiican ee adduunyada marka aad tixgelisid tirada qadarka ah ee dufanka iyo dufanka lumay.
Duufaanta ceyriinka ah ee Trenavar, oo loo yaqaan 'Trendione', waa feejignaan afka ah oo ka duwan taariiqda loo yaqaan steroid trenbolone oo keli ah oo keli ah oo ketone ah 17th. Sidaa darteed, waxay ka dhalataa trenbolone firfircoon jirka, taas oo ka dhigaysa a adag oo xoog leh. Maadaama uu yahay mid isku mid ah dhismaha trenbolone, dhinac ka ah qufaca tren (taas oo badanaa ah natiijo ka dhalatay khidmadda saxda ah ee xididada xididka), isticmaaluhu waa inuu helaa natiijooyin isku mid ah sida isticmaalka trenbolone loo isticmaalo.
Prohormone Tani waa si dhakhso ah oo dhaqdhaqaaqa ah in dadka isticmaala ku diiwaan gashan in ay awoodaan in ay arkaan natiijooyinka ka dib 7 ilaa maalmaha 10 ka dib markii ay qiyaasta koowaad ee budada Trenavar. Si kastaba ha noqotee, halista kaliya ayaa ah budada cayriin ee Trenavar waxay yareyn kartaa heerarka guud ee dulqaadashada, taas oo kugu kicin karta inaad si aad ah u socoto ilaa inta aad awooddo marka aad qaadaneyso laylisyada wadnaha.
Hadda halka budada Trenavar loo tixgeliyo inay tahay mid gaar ah, waxa ay la wadaagtaa sifooyin badan oo la mid ah Trenbolone, oo ah steroid loo isticmaalo, taas oo sidoo kale keentay taageerayaal badan oo ka tirsan dunida jidhka. Waxa labada dhinacba kala soocaya waa xaqiiqda ah in hore ay tahay ketone oo keliya xayawaanka 17th ee ka fog kii dambe ee qaab dhismeedka kiimikada.
Waa maxay qiyaasta budada Trenavar
Inta badan dadka isticmaala 30 ilaa 45mg ee budada Trenavar maalin kasta 30 oo leh taageerada wareegga. Waxaa ugu wanaagsan in la kala qeybiyo qiyaasta daaweynta 2 ilaa 3 ee 15mg maalintii.
Ugu horreyn, isbeddellada waa in lagu soo wareejiyo millimitir 50-70 (mg) maalinkiiba qiyaasta kala-goynta marka ay kali noqoto, iyo haddii aan waxyeellooyinka aysan dhicin, qiyaasta ayaa la kordhin karaa ilaa 100mg ugu badnaan. Looma baahna in ka badan qiyaastaas, waana inaysan ku socon muddo ka badan toddobaadkii 5 ama 6.
Haddii loo isticmaalo qayb ka mid ah xargaha, waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho wacyi-gelinta si loo bilaabo wareegga wareegga, iyo qadar yar oo 20-50mg maalintiiba kala qaybsan tahay. Isticmaalayaal badan ayaa dooranaya inay qalab udiyaariyaan, testosterone, ama primobolan. Waxyaabaha intaa ka badan, dadka isticmaala xitaa waxay doortaan inay isbedel ku sameeyaan durbadiinka durabolin, laakiin maskaxda ku hay in xoqidda laba progestins ay tahay inay sameeyaan oo kaliya dadka isticmaala khibrad.
Markaad isticmaalayso wacyigalinta markii ugu horeysay, waa in lagaa qaadaa qiyaasta qiyaasta ugu yar si aad u aragto sida aad uga jawaabayso.
Sida ay u shaqeeyaan budada Trenavar
Shinawar cayriin ah oo shaqeynaya adoo bar-tilmaameedsanaya 17b-HSD1 ka dibna ka dibna u wareejineysaa dhismaha si aad ugu bedesho jirkaada si trenbolone. Trenbolone iyo budada Trenavar waxay aad u la mid yihiin, dhab ahaantii waxay wadaagaan isla 3 isku xidhnaanta xashiishka labadaba. Duufka cayriinka ee "Trenavar" wuxuu ka duwan yahay xaqiiqda ah in uu leeyahay kiniin 17 ah. Natiijadu waxay keentay in dadka isticmaala ay dareemaan natiijooyin isku mid ah oo ay sameenayaan wareegga trenbolone.
Isticmaalayaasha waxay sheeganayaan korodhka degdegga ah ee murqaha iyo xooggooda guud ee guddiga, iyada oo ay guulo ka bilaabmayso maalmaha 7-10 ka dib qiyaasta koowaad. Ka dib markii toddobaadkii 4-6, inta badan dadka isticmaala tababarka xoogga waxay sheegi doonaan inay aad ugu dhow yihiin, ama ka badan yihiin, diiwaankooda shakhsiyadeed ee kuyaalkooda. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale soo sheegaan muruqyada inay noqdaan kuwo adag, bamgareyn ballaaran inta lagu jiro tababarkooda, iyo dheecaan badan.
Marka la eego dhinaca adkaynta tababarka, isbeddelku waa doorasho liidata, maadaama uu curyaamiyo himilooyinkaaga dulqaadka.
Ka sokow faa'iidooyinka la midka ah, kuwa jidhka sameeya waxay sidoo kale u tagaan budada Trenavar si ay ugu raaxaystaan ​​marka loo eego qiyaasta. Kaalay inaad ka fikirto. Maxaad ugu dhex mari kartaa dhibaatada cirbadeynta marka aad si shakhsi ah u qaadan karto waxyaabo isku mid ah? Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sidii midka hore u taagan ama qayb ka mid ah xargaha.
Prohormone Tani waa unugyada keliya ee la xaqiijiyay oo isku beddelaya Trenbolone markii jirka la taaban karo. Hadda oo ay jiraan tiro ka mid ah budada "Tronavirus" "clones" oo aad u tegi karto, kuwani waxay dhab ahaan u beddelaan dienolone, taas oo ah mid aad u liita marka la barbardhigo.
Budada Trenavar ayaa ah mid aad u badan, waxaana caadi ahaan loo isticmaalaa jidh-dhisayaasha inta lagu jiro diyaarinta tartanka iyo sidoo kale xilli ciyaareedka. Isticmaalayaal badan oo waayo-aragnimadoodu ka mid yihiin barnaamijkan ayaa sheegaya in xaruntan ay awood u leedahay inaanay haysan kaliya, laakiin sidoo kale waxay ku xirantahay tiro dheeraad ah xilliyadaas marka lagu daro cunto yar-yar oo caloriin ah.
Waxaa intaa sii dheer, budada cayriin ee Trenavar uma beddelayso estrogen mana kicin doonto waxyeelooyinka estrogenic marka la wareegayo. Si kastaba ha noqotee, waa mid muhiim ah in lagaa qaado daaweynta wareegga dambe ee daaweynta ama PCT ka dib markii la wado baaskiil-wadareedkan si ay uga hortagaan waxyeellooyinka dhinaca xun.
Hadda halka budada ceeriin ee Trenavar aysan u beddelayn estrogen oo aan kicineynin saameynaha estrogenic, waa mid aad u muhiim ah in aad heshid daaweyn habboon oo ku-meel-gaadh ah ama PCT oo socota ka dib baaskiil-wadareedkan. Maadaama maadada Trenavar ay aad u xoog badan tahay, waxaad u baahan doontaa PCT si ay uga caawiso xubnahaada inay soo kabtaan ka dib markii ay sameeyaan tallaalkan iyo kor u qaadida heerka caadiga ah ee heerka hormoonkaaga.
Suugaanta ceymiska ee Trenavar
In la bixiyo mustaqbalka soo socda. RU-2065
Daawada budada Trenavar ma leedahay wax saameyn ah
Si la mid ah wareegga wax-qabadka, dadka isticmaala waxay arkayaan kororka cadaadiska dhiigga iyo kolesteroolka sare marka baaskiilada budada Trenavar loo wado. Xaaladaha badankood dhiigbaxa sare ee sarreeya wuu baabi'i karaa kadib wareegga wareegga iyo waxtarka beerka ayaa laga yaabaa in lagu kala saari karo taageerada wareega iyo Adeegga Wareegga Dib u Dhiska. Budada Trenavar waxay sidoo kale kordhin kartaa gardarrada waxayna yareyneysaa libido si ku meelgaar ah. Warka wanaagsan waxaa weeye in budada cayriin ee Trenavar aysan aromatise taas oo macnaheedu yahay in aysan u badali doonin Estrogen. Sidaas darteed maahan inaad ka welwelisid horumarinta Gyno aka Man boobs.
Budada Trenavar waxay sida caadiga ah hoos u dhigeysaa heerarka qanjirkaaga taasoo kicinaysa wax soo saarka Prolactin. Soo saarka xad-dhaafka ah ee Prolactin wuxuu keeni karaa xasaasiyad, daal, iyo nuujinta aagga ibta. Si aad uga hortagto noocyada noocyada dhibaatooyinka, isticmaal isticmaala Prolactin inhibitor inta lagu jiro wareeggaaga sida Ka-hortagga-SN by SNS ama Prolactrone by Black Lion Research.
Kuwa yaqaan "Tren Cough" waxay u baahdaan inay ka walwalaan marka baaskiilada Trenavar ay caano boodaan sida tan oo kaliya waxyeellada daawada ee cirbadaha. Tani ma aha wax walaac ah maadaama badeecada budada ceeriin ee Trenavar lagu qaato hadal ahaan.
Kareemka Trenavar ayaa sidoo kale ah hormoon aan hormoon ahayn taas oo macnaheedu yahay inaanay sida adag u jirin jirka, hase yeeshee taasi micnaheedu maaha inaadan qaadin taageerada wareegga. Taageerada wareegga ayaa lagama maarmaan u ah wareegga wax-qabadka.
Dhanka kale, waxyeelada soo socota ayaa lagu soo waramayaa dadka isticmaala kuwaas oo hore u baddalay budada cayriin ee Trenavar:
Waxay kordhisaa gardarada
Waxay keeni kartaa madax xanuun iyo xanuun lugaha
Waxay yareysaa heerarka tayroodh
Wuxuu keeni karaa heerarka sonkorta dhiigga
Waxay kordhin kartaa prolactin
Waxay yareysaa heerarka dulqaadashada
Waxay keeni kartaa kor u kaca kolesteroolka iyo heerarka cadaadiska dhiigga
Cadaadiska ku dhejin karaa wadnaha iyo beerka
Waxay sababi kartaa qulqulo hurdo, daal iyo qalafsanaan
Inkasta oo ay jiraan xisaabo qaar oo xooga saaraya budada Trenavar waxay sababi kartaa "qufac tren", tani maaha wax aad marin kartid markaad isticmaalayso tallaalkan. Waxaad la kulmi kartaa oo kaliya markaad isticmaasho Trenbolone laysku duro
Sida loo iibsado budada Trenavar ee AASraw
Macmacaan cayriin caan ah Trenavar